Geographic Coordinates မှ UTM သို့ Geofumadas သို့ပြောင်းရန် Excel template
UTM ဖို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်ပြောင်း Excel ကို template ကို
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 2008 ArchiCAD, Cartografia, downloads,
ဤသည် template ကိုဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့် UTM သြဒီနိတ်အတွက်ပထဝီအနေအထားအရကိုသြဒီနိတ်၏ပြောင်းလဲခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
ဒေတာများကို၎င်းတို့အားလိုအပ်သောပုံစံဖြင့်လာရောက်နိုင်အောင် Excel စာရွက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လက်ခံသည့်တန်ဖိုးများ၏အကွာအဝေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံမှန်ကန့်သတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသည့်အခါလေးစားရမည် UTM သြဒီနိတ်ကရှင်းပြခဲ့သည်.
အဆိုပါ spheroid drop-down ပုံစံကနေရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်
လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်နှစ်ဦးစလုံးအဆုံးစွန်သော decimal ရှိစေခြင်းငှါ, (အဘယ်သူမျှမသင်္ကေတဒီဂရီ, မိနစ်သို့မဟုတ်စက္ကန့်) နံပါတ်များကိုကြွလာတော်မူခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောကော်လံထဲမှာကွဲကွာရပေမည်။
အရှည်အတွက်အဆင့် 180 ရောက်ရှိဖို့မဖြစ်သင့်
လတ္တီတွဒ်မှာအဆင့် 90 ရောက်ရှိဖို့မဖြစ်သင့်
သူတို့ကလာမယ့်ယူနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိနစ်, စက္ကန့်, 60 ရောက်ရှိဖို့မဖြစ်သင့်
အရှေ့ / အနောက်တစ်ခု '' အီး 'သို့မဟုတ်' 'W' 'မြို့တော်ဖြစ်ရမည်
မြောက်ကိုရီးယား / တောင်တစ်ခု "N က" သို့မဟုတ် "S" ကိုအရင်းအနှီးဖြစ်သင့်
သင်သည်အခြားစာမျက်နှာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စီမံခန့်ခွဲထားလျှင်ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ excel သင်မိတ္တူ / Paste လုပ်ပေးရန်ရှိသည်အားလုံး
အစိမ်းရောင်ကော်လံပြဒါ့အပြင်ဒေသရွေးချယ် spheroid သည်နှင့်အညီ, UTM သြဒီနိတ်ဖြစ်ကြသည်။
၃။ AutoCAD သို့မည်သို့ပို့ရမည်နည်း
အဆိုပါအပိုဆောင်းကော်လံထိုကဲ့သို့သော AutoCAD အဖြစ်ပေးပို့နိုင်စေဖို့ UTM သြဒီနိတ်များမှာ အခြားဆောင်းပါးထဲမှာကရှင်းပြခဲ့သည်။ Excel UTM မှ Google Earth သို့ပေးပို့ရန် ဒီကတခြားဆောင်းပါးတွေ့မြင်.
UTM ဖို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်ပြောင်းဖို့ template ။
သင်နှင့်အတူဝယ်လို့ရပါတယ် ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် Paypal ။
ယခင် Post မှ« Previous ယင်းကိုသြဒိနိတ်ဇယားကွက်ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Next Post UTM ပထဝီ Excel ကိုကိုသြဒိနိတ်ပြောင်းနောက်တစ်ခု»
၅၁ "ပထဝီဆိုင်ရာကိုသြဒီနိတ်မှ UTM သို့ပြောင်းရန် Excel Template" သို့ပြန်ကြားချက် ၅၁ ။
သြဂုတ်လ 2019 ပု
သငျသညျဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့်အတွင်းပေမယ်ဒဿမအတွက်သြဒီနိတ်ကို support မသာတဲ့ template ကိုပေးပို့ဖို့, သင်မေးလ်မှသတင်းစကားရေးပါသင်ဝယ်ယူလုပ်သည့်အခါရတယ်။
ငါ UTM ဖို့ပထဝီ converting များအတွက် template ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ဘယ်လိုငါဒဿမပထဝီကိုသြဒီနိတ်ရိုက်ထည့်နိုင်သလဲ
ဒါကြောင့်အခြားဇုန် (ဇုံ) UTM ညွှန်ပြနေသောကြောင့်ရသည်မှာဝန်ထမ်းများ, သူတို့ကိုအသိအမှတျမထားဘူး။
ဧပြီလ 2019 ပု
နိုဝင်ဘာလ 2018 ပု
ထောင်ပေါင်းများစွာသော separator အဖြစ်ကော်မာကဒါ: -56.514,707 -12.734,156
သင်ကဝယ်ခင်ကြိုးစားကြချင်လျှင်, Excel ကို e-အယ်ဒီတာ (@) egeomates ဥပမာတစ်ခုဒေတာပေးပို့ပါ။ com
Alves သူ says:
ဤသည် planilha Converter Geographic Coordinate (decimal Grau) UTM em em မီတာ
ထွ: X ကို -56.514.707
ရန်: X ကို 552758.64049
Miguel Navarrete သူ says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာတင်းပလိတ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါအမှတ် N ၂၀ - ၂၆ - ၃၁.၅ W ရှိပါကဤပုံစံသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ UTM ကိုသြဒီနိတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ 20 - 26 - 31.5, အကယ်၍ ညွှန်းကိန်းများအနေဖြင့်လတ္တီတွဒ် ၉၀ ဒီဂရီအထိမရောက်ရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်
ပြီးခဲ့သည့်ညကဆီကို miguel.manamond သို့ ...
ကျနော်တို့ဒီ miguel.navarrete သို့ပေးပို့ပါပြီ ...
ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ် UTM ဖို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်ပြောင်းပေမယ့်မ paypal Excel ကို template ကိုကနေတဆင့်မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့ကနောက်ဆုံးညဥ့်လစာငါရလိုအပ်ပါကငါငွေပေးငွေယူအိုင်ဒီရှိသည်, ငါအဖြေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားသတိထားကြလိမ့်မည်
ဇူလိုင်လ 2017 ပု
ငါမေးလ်ဟာ download link ကိုပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
ရာဖေးလ် Gallardo လိုပက်ဇ်။ သူ says:
ငါကို PayPal နှင့်အတူပေးဆောင်ခြင်းနှင့် Paypal ၏လက်ခံရရှိမှုအပေါ်အပြည့်အဝစုတ်ယူခြင်းမဆိုအခွင့်အလမ်းပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။
ဇူလိုင်လ 13 2.017 Paid ။ 08: 59: 22 02 GMT +: 00 ။
ငါဖိုင်ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုပြောဘို့ဆုတောင်းကြလော့။
R. Gallardo ။
Delfin သူ says:
နိုဝင်ဘာလ 2015 ပု
ဒီဂရီနှင့်ဒဿမဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့်ကနေသွားကြဖို့, ဤတန်ဖိုးများကိုကံကောင်းပါစေ Graos ဖို့ဒဿမခု၏လေးစားခြင်း, မိနစ်, စက္ကန့် 60 3600 ဝေယူရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ Exel အတွက်ပြန်လာစေနိုင်သည်။
ကောငျးကငျတမနျ Vilches သူ says:
ဒုတိယအ: ငါ UTM ဖို့ပထဝီဘုန်းဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဒါပေမယ့်ငါဘရာဇီးသည် spheroid အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများဖို့အသုံးပြုအရာကိုတစ်ဦးရှင်းပြချက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
Jose သူ says:
11 အလွန်ကောင်းသောရှင်းပြချက် !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ဘရိုင်ယန် သူ says:
မတ်လ 2013 ပု
အဲဒီ template ကို UTM မှ Geograficas ဖြစ်ပါသည်
မေးလ် Check, တခါတရံတွင်သူက spam များကိုတတ်၏။ သင်တို့မူကား, PayPal ကများ၏ငွေပေးချေမှုငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်တစ်ဦးကို download ULR နှင့်အတူအီးမေးလျကိုရောက်ရှိတစ်ကြိမ်။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို သူ says:
Jose Matzar သူ says:
ထို့နောက်သင့် UTM ထိုစာတစ်စောင်ပြီးနောက်စာကိုအီး zy key ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုသင်အလိုအလြောကျ UTM သင့်ရဲ့ဧရိယာကိုသြဒိနိတ်တည်နေရာ, သင်စမ်းသပ်ရှိသည်နှင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောပြပါသည်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းညှိနှိုင်းရိုက်ထည့်စက်ဝိုင်းdespésရွေးပြီးအချင်း 1.00 ၏စက်ဝိုင်းပါနဲ့။
သင်ဧရိယာကိုပြောင်းလဲရှိရာဒေသမှာအလုပ်လုပ် UTM, သင်ရုံသင့်ရဲ့ဧရိယာကိုပြန့်နှံ့, ဒီမိစ္ဆာပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့ရှိသည်။
jasiel သူ says:
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ အကြှနျုပျ၏မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ငါဘာလုပ်နိုင် UTM အဆိုပါ AutoCAD ရိုက်ထည့်ဖို့ကိုသြဒိနိတ်လျှင်ကားမောင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသညွှန်ပြလို့မရဘူး ?? ထိုအခါငါ UTM အတွက်သြဒီနိတ်ရှိပေမယ့် AutoCAD ဒေသများကိုင်တွယ်ပါဘူး (သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဖို့လမ်းကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်) ။ 15 ဒေသတွင်း၌ဝင်ငွေအဘယ်သူမျှမကပြဿနာရှိသည့်အခါ UTM ဥပမာကိုသြဒိနိတ်, ဒါပေမယ့်ငါတပ်မက်လိုချင်သောအစိတျအပိုငျးမှာတည်ရှိပါတယ်မဟုတ်ဝင်ငွေဒေသ 16 အခါ။
အမြဲ paypal ၏ငွေပေးငွေယူနဲ့ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူ, spam များကို folder ကိုကြည့်ရှုလော့တစ်ဦးကို download URL ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ရောဘတ် သူ says:
ထိုအ paypal အားဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် .. သငျသညျအကြှနျုပျ၏အီးမေးလ်ငါ့ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘာမှဒေါင်းလုဒ်မဆွဲခဲ့ဘူး ??
ယခုပင်လျှင် .. ငါလုပ်ပေးဘာမှကို download လုပ်ပါပေးဆောင်မဟုတ်လော
humberto သူ says:
ငါ exc အတွက်ပုံစံနှုန်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ရှိရာအလွန်ကောင်းသောသင့်ရဲ့ post ကို
Fco သူ says:
Francisco က Hernandez သူ says:
အချက်အလက်များ၏ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပညာရေး, သတင်းအချက်အလက်လျော်သောအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ဖယ်နှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးလက်နက်များဖြစ်ကြသည်။
javi သူ says:
Aitor သူ says:
ကျန်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတာကဒေတာပါတဲ့စာရွက်တစ်ခုပါ။ တစ်ခုတည်းသောဖော်မြူလာကအရင်က "တွက်ချက်လိုက်တဲ့" ကိုသြဒီနိတ်ဒေတာတွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နံပါတ်ထည့်သွင်းဖို့ပါ။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ခြေထောက်လည်းမရှိ၊ ခေါင်းလည်းမပါဘူး။ သင်ကထွက်စစ်ဆေးနိုင်လျှင်။
Cesar ထင်းရူး သူ says:
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှူငွေကျေးဇူးတင်စကားကျေးဇူးတင်သင်တစ်ဦးမီးသတ်သမား friend'm နှင့်ပြည်သူများကိုယခုဂျီပီအက်စ်ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုနေသည်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရအဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွက်ချက်မှုပေါ်နှင့်စက္ကန့်အတွင်း reorta သောအခါအဘို့အလို UTM သမားရိုးကျ browser များနှင့်တစ်ဦး Laptop ကိုအပေါ်ရှာဖွေရေးဘို့ကိုသြဒိနိတ်ပါပြီ သငျသညျလူတစ်ကဏ္ဍကြောင်းချက်ချင်းသိကြနှင့်အရှင်စက်ဝိုင်းရှာဖွေရေးပိတ်ဖို့
မိခါလ သူ says:
ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 ပု
မင်္ဂလာပါကျနော်ဖိုင် extension များအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့ file-extensions.org.
သိုးထိန်းသည် သူ says:
jo, ငါတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့စာတမ်းအတွက်နေရာတစ်နေရာစာအုပ်ဆိုင်ရန်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ Blog ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါဟွန်ဒူးရပ်စ်အပေါ်ရှိရာ shp ဖိုင်တွေ site တစ်ခုကဆင်းခြေရာခံများနှင့်ယခုငါ UTM Quantum GIS တစ်အလွှာထုတ်လုပ်ရန်ကိုသြဒိနိတ်သွားကြဖို့ခဲ့, သင်တို့၏ဓါးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်အဘယ်သူမျှမငါ csv format နဲ့မှသွားဖိုင်ကို copy နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ Linux နဲ့ OpenOffice 3.0 ကိုသုံးပါ, သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြောင်းလဲခြင်း Calc အတွက်မာနထောင်လွှားအလုပ်လုပ်တယ်သတိပြုပါချင်ပေမယ့်များစွာသောရမှတ်မရှိသောကွောငျ့အကြောင်း, မှာအားလုံးအရေးမပါဘူး, ဒါကြောင့်ငါအလုံအလောက်ခဲ့သည် အဆိုပါမီးစက်အလွှာ Quantum ဒဿမ support မဟန်သောကွောငျ့, ကိုယ်တိုင်လုပ်များနှင့်ပတ်ပတ်လည်နံပါတ်များကို။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်ဘလော့ဂ်ကိုအက္ခရာများထံမှလာသောသူသည်ငါ့ကိုများကဲ့သို့လူများအတွက်တစ်ဦးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပထဝီသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုလောကီသားတို့သည်အဝင်စိတ်ဝင်စားသည်။
လူး သူ says:
ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ခွန်းဆက်သဖြင့်ဤနေရာတွင်သင်ထည့်ဝင်သောပံ့ပိုးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ “ အစုလိုက်အပြုံလိုက်” ကိုသြဒီနိတ်၏ပြောင်းလဲခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ မေးခွန်းတစ်ခု - သင်၏စာရွက်စာတမ်းတွင်သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းထည့်ဝင်ငွေကိုမည်သို့ကိုးကားသင့်သနည်း။
Alejandro Vilchis သူ says:
galvarezhn ဂုဏ်ယူပါတယ်, ငါသည်သင့် site စိတ်ဝင်စားဖို့ရှာဖွေငါ့ကိုအလွန်အသုံးဝင်သောခဲ့။ ကြေးဇူးတငျစကား
Alvaro သူ says:
ဇူလိုင်လ 2009 ပု
အစ်ရှ်မေးလ် သူ says:
Gibran သူ says:
မင်္ဂလာပါဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, မည်သူမဆိုတစ်ဦး Excel ၏သိတယ်ဒါပေမယ့်ဒဿမဒီဂရီဒီဂရီမိနစ်စက္ကန့်ပြောင်းလဲ? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား
အိပ်မက်ကိုမြင် သူ says:
ဘုန်းအလှူငွေ !! ကျနော်တို့အချက်အလက်များ၏ဤအမျိုးအစားဝေမျှဖို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စန်း Renato သူ says:
ဟေ့ ... ငါ GPS ဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူနေခဲ့ပေမယ့် "နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်" ပြforနာများအတွက် (အင်တာနာကေဘယ်လ်မေ့သွားသည်။ ) ကျွန်ုပ်၏စစ်တမ်းကိုမပြီးနိူင်ပါ။ ရေကြောင်းပြသူတစ် ဦး နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကောင်းတစ် ဦး အလုအယက် ... ကြီးမြတ် !!!!
ချတန်းနှင့်စစ်ကြောင်းများမမြင်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိတ္တူအဆိုပါ penultimate အတန်းကိုထုတ်လေ၏
dianicus သူ says:
အလွန်ကောင်းသောနှင့်လက်တွေ့, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါတောင်မှငါမှာပြproblemနာနည်းနည်းရှိတယ်၊ ငါပြောင်းလဲဖို့ကိုသြဒီနိတ် ၈၀၀၀ နီးပါးရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ - Excel သည် ၃၂၃ ကိုသာခွင့်ပြုသည် - ကျွန်ုပ်ဖော်မြူလာများကိုဆွဲယူရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
ဒါဝိဒ်သည် သူ says:
ပထဝီ link ကို UTM မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ထို Excel ကိုငါက q တန်းထားဖို့လိုတယျ။
မေးကတခြားအကူအညီနဲ့သငျသညျအကြှနျုပျကိုပေးနိုငျလြှငျရှိ TME UTM ကိုသြဒိနိတ်တစ်ခု Excel ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီး, အပြန်အလှန်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးဇူးတငျစကား
, ဒါဝိဒ်မင်္ဂလာပါ ဒီ post ဒါဟာပြောင်းပြန်, ပထဝီ UTM မပါ Excel ရှိပါတယ်။
ဒdecမကိန်းဂဏန်း၊ စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်ကိုပြောင်းလဲမယ့်စာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးခြင်းအကြောင်း ... ဒီနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကောင်းငါလုပ်ဖို့ထိုင်လိုက်မယ်
အလွန်ကောင်းသောအလုပ် !! ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ငါပြောင်းလဲခြင်းဤအမျိုးအစားနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ utm မှ tme၊ tme သို့ utm နှင့် geodesics နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှပြောင်းလဲမှုများအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် TMCalc ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ UTM ကနေ Geodesics အထိ Excel ရှိရင်ဒီ program ကငါ့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျနော့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကဒီစာမျက်နှာကိုရှာဖို့ပဲ။ ဒါဟာငါ့ကိုဒီဂရီဖြတ်သန်းတဲ့ Excel စာရွက်ကိန်းဂဏန်း (စက္ကန့် ၄၅.၇၆၂၅ ဒီဂရီ) အထိဒီဂရီမိနစ်နဲ့စက္ကန့် (45.7625 ′45′ 45,) ဖြစ်တယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား၊ ဒီဟာဖိုရမ်မဟုတ်ရင်စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သည် ingdvd1@hotmail.com
မာရီယာ Alonzo သူ says:
ရုံသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်, ငါဖိုင်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့ကြပြီ။
Edgar သူ says:
သြဂုတ်လ 2008 ပု
ငါသည်ကိုယ် AutoCAD အပေါ်ကောင်းလေ့လာနေတာနဲ့ကျွန်မအကြီးအကူအညီနဲ့ပြဿနာများအားလုံးရှာတွေ့
Ulises Urcid Beez သူ says:
Martin သူ says:
ထူးချွန်တယ်…ငါ့ကိုမပေးတော့ဘူး .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒီဖိုင်…